I-China Edge Protection Seal Strips mveliso kunye nabenzi | Tianzheng
I-Plastic Edge Trim ingasetyenziswa phantse naphi na apho kufuneka khona umgangatho wokuhombisa okanye wokhuselo. Iiplastiki ezinqamlezileyo zibonelela ngokuguquguquka, ukugquma, kunye nokumelana neekhemikhali kunye naziphi na iimeko zemozulu. Isinxibo seplastikhi sinokumelana nawo onke amaqondo obushushu agqithisileyo. Iiplastiki ezinqamlezileyo zihamba ngombala wentsimbi, osetyenziswa kuwo nawuphi na umda okanye umphezulu ukuze utyibilike kubandakanya iingcango ze-RV, iinqwelo zegalufa, iikhabhathi zelori, iitrektara, izithuthuthu, ii-ATV fenders, i-fiberglass, isinyithi kunye nokunye.
Singabonelela ngezisombululo ezahlukeneyo ukukhusela imiphetho yakho kwimpembelelo nakumonakalo. Ukukhetha kwethu okubanzi kweeprofayili zokukhusela iirabha kufanelekile ukuba zisetyenziswe kuluhlu olubanzi lwephepha, iphaneli kunye nobukhulu bomphetho. Sivelisa iiprofayili zethu zokukhusela umda kwiimveliso ezahlukeneyo ukuze zilungele isicelo sakho kunye nendawo yokusebenza. Sinokuvelisa iiprofayili ze-bespoke kwiinkcukacha zakho ngqo, ngokuxhomekeke kubuncinane be-odolo yobungakanani.
Iiprofayili zethu zerabha yokhuselo lomda ziyilelwe ngokukodwa ukufunxa iimpembelelo ukukhusela imiphetho yakho kumonakalo. Zikwasebenza ukukhusela abasebenzisi kukonzakala okunokubangelwa yimiphetho emincinci nebukhali. Sisoloko sivelisa iinkangeleko zethu zisuka kwelona khomputha liphezulu lomgangatho likhoyo. Oku kuqinisekisa ukuba abakhuseli bemiphetho abakulungelanga ukusetyenziswa kuphela, kodwa bakwenziwe ukuba bahlale ixesha elide. Ngaphandle kokunikezela ngamandla aphezulu kunye nokumelana neinyembezi, abakhuseli bethu abasemacaleni nabo bayabhetyebhetye kakhulu. Oku kwenza ukuba iiprofayili zethu zilungele ukujikeleza iindidi ezahlukeneyo.
Ungafaka uninzi lwabakhuseli bethu abasemacaleni ngaphandle kokuncamathela. Oku akwenzi ukuba ufake kuphela kwaye ususe iiprofayili njengoko kufuneka. Ikwenza ukuba usebenzise ubude obude amaxesha amaninzi.
Yesicelo: Ukhuseleko olungaphelelanga emaphethelweni, ngombala wokuhombisa
Imveliso: I-Self Grip Edge Trim
Ukuqina (Unxweme A): 67 - 82 °
Material: PVC, intsimbi
Umbala: Mnyama, bomvu, mhlophe, ngwevu, blue
Sebenzisa isandla esinye, uyiqengqele ngokukhawuleza emacaleni kwaye kwangaxeshanye cinezela ngesithupha sesinye isandla kwindawo apho i-t / ikhawulezayo ihlangana khona. Inokunqunyulwa ngokulula kwaye inokunqunyulwa ijikeleze i-engile engqongqo ngokusika icandelo le-V nge-tin snips. Iiphelo zinokudityaniswa ngokufudumeza iziphelo ezichukumisayo ngesiqwenga sesinyithi esishushu.
Egqithileyo Ulwakhiwo lweRubber Seal Strip
Okulandelayo: Nokuncamathela ngerabha Tywina
Ukukhuselwa komphetho weStrip Seal Strip